Qalalan: maamule CLI oo is-dhexgal ah oo loogu talagalay weelasha Docker | Laga soo bilaabo Linux
Docker waa softiweer awood u siiya u-shaqeynta heerka nidaamka qalliinka loo yaqaan weelasha, wuxuu adeegsadaa astaamaha go'doominta kheyraadka ee kernel Linux, sida cgroups iyo kernel namespaces, iyo kuwa kale si loogu oggolaado konteenarrada madaxbannaan inay ku shaqeeyaan hal tusaale oo Linux ah.
Docker wuxuu bixiyaa wado si ammaan ah loogu socodsiin karo codsiyada go'doonka ah weel, oo ay ka buuxaan dhammaan ku-tiirsanaantiisa iyo maktabadaha.
Haddii aad tahay isticmaaleyaasha 'Docker' maanta waxaan ka hadli doonnaa dalab laga yaabo inaad xiisayso.
1 Ku saabsan qalalan
2 Sidee loo rakibaa qallalan Linux?
3 Sidee loo isticmaalaa qallalan?
3.1 Furayaasha Caalamka
3.1.1 Amarada konteenarada
3.1.2 Amarada sawirka
3.1.3 Amarada shabakada
3.1.4 Amarada adeegga
3.1.5 Ku dhex dhaqaaq bakhaarada
Ku saabsan qalalan
Qalalan waa mid bilaash ah, iskutallaab ah, iyo codsi furan oo furan oo ka socda khadka taliska si loo maareeyo Docker.
Qalabkan wuxuu na tusayaa macluumaadka ku saabsan weelasha, sawirrada iyo shabakadaha, iyo haddii Docker Swarm uu socdo, waxay sidoo kale muujineysaa dhammaan noocyada kala duwan ee macluumaadka ku saabsan xaaladda koox kooxeed.
Waxay ku xirmi kartaa daemons maxalli ah ama fog.
Marka lagu daro soo bandhigida macluumaadka, waxaa loo isticmaali karaa in lagu maareeyo Docker. Amarada badankood ee rasmiga rasmiga ah ee 'Docker CLI' ayaa laga heli karaa Qalalan isla dabeecad ahaan.
Sidee loo rakibaa qallalan Linux?
qalalan waxaa laga heli karaa hal binary sidaa darteed rakibideeda Linux waa mid aad u fudud.
Kuwa kuwa Arch Linux, Manjaro iyo adeegsadayaasha soosaara ayaa ka heli kara qalalan AUR, sidaa darteed waa inay AUR ku kartiyeeyaan faylkooda pacman.conf.
Si aad u rakibto, kaliya waa inaad qortaa amarka soo socda:
pacaur -S dry-bin
Sidoo kale waa suurtagal in lagu rakibo Qalalan Docker weel ahaan, markaa haddii aad rabto inaad sidan ku rakibto waa inaad ku qortaa waxyaabaha soo socda:
docker run -it -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock moncho/dry
Jidka ugu dambeeya ee Ku rakibidda qallalan ee Linux waa adigoo soo dejisanaya qoraal ka taxaddari doona rakibidda.
Waa inaan furnaa terminal oo aan fulino amarradan soo socda:
curl -sSf https://moncho.github.io/dry/dryup.sh | sudo sh
Sameeyay rakibida hadda waxaan bilaabi karnaa adeegsiga arjiga nidaamkayaga.
Sidee loo isticmaalaa qallalan?
Si aad u bilawdo adeegsiga codsigan nidaamkayaga, Waa inaan furnaa terminal oo aan fulino amarka soo socda:
Markaad sidan samaynayso, daaqad la mid ah tan waa inay muuqataa, halkaas oo ay ku tusinayso in qalalan durbaba shaqeynayo oo muujinaya macluumaadka.
qalalan waxaa loo isticmaali karaa iyadoo la isticmaalayo furayaasha qaar, markaa ka qaadashada macluumaadka booskaaga rasmiga ah ee github, marinku waa kuwan soo socda:
% Muuji liistada shaandhada
F1 Kala sooc liistada
F5 liiska cusbooneysiinta
F8 muuji isticmaalka diskka xira
F9 muuji dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee 10
F10 soo bandhig macluumaadka macluumaadka
1 muuji liiska weelka
2 muuji liiska sawirka
3 muuji liiska shabakadda
4 muuji liiska guntinta (qaabka Swarm)
5 tus liiska adeegyada (qaabka Swarm)
Arrowup calaamadda u dhaqaaji hal saf
Falaadhi calaamadda u dhaqaaji hal xariiq
g calaamadda u dhaqaaji xagga sare
G guji tilmaamaha salka
q qalalan ka bax
Furaha isku xidhka
Ku qor soo bandhigayaa liiska amarka weelka
F2 awood u yeelo / jooji muujinta konteynarrada istaaga
l Gudayaasha weelka
e kala bixid
Ctrl + e ka qaad dhammaan weelasha la joojiyey
Ctrl + k dilaan
Ctrl + r bilow / dib u bilow
Ctrl + t joojiso
Fure ama isku dhafan
r ku ordo amarka weel cusub
Ctrl + d ka saar sawirada sudhan
Ctrl + e sawirka ka saar
Ctrl + f Tirtir sawirka
Ku qor kormeer
Ctrl + e saar network
i kormeer adeegga
l diiwaanka adeegga
Ctrl + r saar adeegga
Ctrl + s adeegga joojinta
Ku qor muuji howlaha
Ku dhex dhaqaaq bakhaarada
g u wareeji tilmaamaha bilowga keydka
G u wareeji tilmaamaha dhamaadka keydka
n baaritaanka ka dib, u gudub natiijada xigta ee raadinta
N baaritaanka kadib, dib ugu laabo natiijadii hore ee baaritaanka
pg kor u wareeji xariijimaha 'cabirka shaashadda' khadadka
pg hoos khadadka 'cabbirka shaashadda' ku tilmaam hoos
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Qalalan: maamule CLI oo is-dhexgal ah oo loogu talagalay weelasha Docker
LibreOffice 6.0 wuxuu hadda diyaar u yahay isticmaaleyaasha dhamaadka iyo bay'adaha ganacsiga